farta oo soo noqotay – Borama News Network
HomeArimaha Bulshadafarta oo soo noqotay
February 20, 2019 Nimco Arimaha Bulshada, Dhacdooyinka Caalamka, English News, Hot Videos, Somali News Comments Off on farta oo soo noqotay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayey oo Booqasho shaqo kusoo kala bixiyey Wadamada Burundi iyo Jabuuti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha JFS ayaa intii uu ku sugnaa dalka Burundi waxuu kulan uu la qaatay
Madaxweynaha Burundi, isaggoo kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsantahay siddii la isaga kaashan lahaa dagaal lagu jiro Kooxda Alshabaab, maadaama Burundi dalka Soomaaliya ay ka joogaan Ciidamo qeyb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ayaa caasimada Jabuuti kulan kula yeeshay Madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana ay kawada hadleen xiriirka walaaltinimo ee ay wadaagaan labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa, iyaggoo kulankooda ku lafo-guray xaaladaha guud ee gobolka.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa isaga baaqsaday scodaal la filayay inuu maanta ku gaaro magaalada Adis-Ababa, si halkaasi loogu kulansiiyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo waxyaabaha baajiyay qeyb ay ka tahay caqabado soo baxay.
Caqabadaha soo baxay durba waxaa kamid ah cida yeelaneysa doorka dhex dhexaadinta iyo heerka kulanka labada dhinac, iyadoo la filayo in labada masuul la kulansiiyo marka uu Madaxweyne Farmaajo ka soo laabto shir ka dhacaya dalka Masar.